यो साधारण ट्याबले एउटा फारम नियन्त्रणको साधारण गुणहरू परिभाषित गर्न सक्षम पार्दछ।यि गुणहरू नियन्त्रण प्रकारमा अनुसार फरक हुन्छन। याद गर्नुहोस निम्न सबै गुणहरू हरेक नियन्त्रणका लागि उपलब्ध हुन्छन।
चयन गरिएका फारम तत्वको प्रसङ्ग मेनु खोल्नुहोस - नियन्त्रण - साधारण ट्याब रोज्नुहोस
फारम नियन्त्रण उपकरणपट्टीहरू वा फारम डिजाइन उपकरणपट्टी खोल्नुहोस,नियन्त्रण प्रतिमा - साधारणट्याब क्लिक गर्नुहोस
यदि तपाइँ हालको फारम कागजात HTML ढाँचा निर्यात गर्नुहुन्छ, पूर्वनिर्धारित नियन्त्रण मानहरू निर्यात गरिएका छन्, हालको नियन्त्रण मानहरू होइन। पूर्वनिर्धारित मानहरू निर्धारण हुन्छन् - नियन्त्रण प्रकारको आधारमा - गुणहरूको पूर्वनिर्धारित मान (उदाहरणका लागि, पाठ क्षेत्रहरूमा), पूर्वनिर्धारित स्थिति (चेक बक्स र विकल्प फिल्डहरूको लागि), र पूर्वनिर्धारित चयन (सूची बाकसहरूका लागि)।
खुल्ला कागजात वा वेब पृष्ठ प्रकार बटन प्रकारका लागि URL बाकसमा URL ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस्।
यदि तपाईं प्रयोगकर्ता मोडमा बटनमा माउस सार्नुहुन्छ भने, URL विस्तारित टिपको रूपमा देखा पर्दछ, प्रदान गरिएको छ कि कुनै अन्य मद्दत पाठ प्रविष्टि गरिएको छैन।
अधिक पाठ लम्बाइ
पाठ र कम्बो बाकसहरूका लागि,तपाईँंले क्यारेक्टरको अधिकतम सङ्ख्या परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ जुन प्रयोगकर्ताले प्रविष्टि गर्न सक्दछन। यदि यो नियन्त्रण फाँट गुण अनिश्चित भएमा,पूर्वनिर्धारित सेटिङ शून्य हुनेछ।
यदि नियन्त्रण एउटा डाटाबेस सँग लिङ्क गिरिन्छ र पाठ लम्बाइ डाटाबेसको फाँट परिभाषाबाट स्विकार गर्नुपर्ने छ भने,तपाईँंले पाठ लम्बाइ यहाँ प्रविष्टि गर्नै हुँदैन। यदि नियन्त्रण गुण परिभाषित गरिएको छैन("Not Defined" अवस्था) भने मात्र सेटिङहरू स्विकार गरिन्छन।
स्क्रोलपट्टी वा स्पिन बाकसका लागि तेर्सो वा ठाडो अभिमुखिकरण वर्णन गर्दछ।
मास्क गरिएको फिल्डहरूसँग तपाईले एक लेवल मास्क निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुनेछ। एक शाब्दिक मास्क एक फारमको प्रारम्भिक मानहरू समावेश गर्दछ, र एक फारम डाउनलोड गरे पछि सधैँ देखिने छ। मास्क सम्पादनका लागि क्यारेक्टर कोड प्रयोग गर्दै, तपाइँ प्रविष्टिहरू निर्धारित गर्न सक्नुहुन्छ जुन प्रयोगकर्ताले नस्किएको फिल्डमा टाइप गर्न सक्दछ।
आक्षरिक मुकुण्डोको लम्बाइ जहिले पनि सम्पादन मुकुण्डोको लम्बाइ सँग अनुरूप हुनु पर्दछ। यदि यो घटना नभएमा,सम्पादन मुकुण्डो यात काटिन्छ वा सम्पादन मुकुण्डोको लम्बाइ सम्म खाली स्थानहरूले भरिन्छ।
मुद्रा फाँटहरू प्रयोग गरिरहेको बेलामा मुद्रा प्रतीक अंकको अगाडि वा पछाडि प्रदर्शन हुन्छ कि भन्ने निर्धारण गर्दछ। पूर्वनिर्धारित सेटिङ मुद्रा प्रतीकहरू उपसर्ग बनाईएका छैनन।
तपाईँंसँग ढाँचाबद्ध सामग्रीहरू (मिति, समय, र अरू धेरै ) लाई स्विकार गर्ने नियन्त्रण फाँटहरू सँग ढाँचा जाँच बाकस हुन सक्दछ। यदि कडा ढाँचा कार्य सक्रिय (हो) पारियमा, मात्र स्विकार्य क्यारेक्टरहरू मात्र स्विकार गरिन्छन। उदाहरणका लागि, एउटा मिति फाँटमा, सङ्ख्याहरू वा मिति डेलिमिटरहरू मात्र स्विकार हुन्छन,तपाईँंको कुञ्जीपाटी सँग टाइप गरिएका सबै वर्णहरू बेवास्ता गरिन्छन।
तपाईँको आफ्नै डाटाबेस नेभिगेसन बटनहरू डिजाइन गर्न तपाईँले नेभिगेसन कार्यहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
निम्न तालिकाले तपाईँंले एउटा बटनमा मानाङ्कन गर्न सक्ने कार्यहरू वर्णन गर्दछ।
कोहि पनि होइन
कुनै क्रिया रहेन।
फारम पेश गर्नुहोस
तपाईँले PDF फाइल निर्यात गरेको बेलामा फारमको डेटा गुण "URL" पाठबाकसमा URL प्रविष्ट गर्नुहोस् ।
फारम रिसेट गर्नुहोस
पूर्वनिर्धारित डिफल्टहरूमा अन्य नियन्त्रण क्षेत्रहरूमा सेटिङ्हरू रिसेट गर्दछ (पूर्वनिर्धारित स्थिति, पूर्वनिर्धारित चयन, पूर्वनिर्धारित मान)।
कागजात/वेब पृष्ठ खोल्नुहोस
URL अन्तर्गत निर्दिष्ट गरिएको URL खोल्छ। तपाईँले लक्षित फ्रेम निर्दिष्ट गर्न फ्रेम प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
हालको रेकर्डलाई पहिलो रेकर्डमा सर्दछ।
अहिलेको फारमलाई अघिल्लो रेकर्डमा सर्दछ.
हालको फारमलाई पछिल्लो रेकर्डमा सर्दछ।
हालको रेकर्डलाई अन्तिम रेकर्डमा सर्दछ।
रेकर्ड बचत गर्नुहोस
यदि आवश्यक भएमा,अहिलेको रेकर्डलाई बचत गर्दछ।
डेटा प्रविष्टिलाई पूर्वस्थितिमा फर्काउनुहोस
हालको रेकर्डमा परिवर्तनहरू उल्ट्याउँदछ।
पङ्क्ति घुसाउनुहोसमा हालको हालको फारमा सर्दछ।
हालको रेकर्ड मेट्दछ
फारम ताजा गर्नुहोस्
हालको फारमको सबै भन्दा तत्काल बचत गरिएको संस्करणलाई पुन: लोड गर्दछ।
नियन्त्रण फाँटहरू जसमा एउटा फ्रेम छ सँग ,तपाईँंले किनारा गुणलाई प्रयोग गरेर तपाईँंले फारममा किनारा प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँंले "Without frame", "3-D look" वा"Flat" विकल्प मध्ये चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
क्लिकमा फोकस लिनुहोस
यदि तपाईँंले यो विकल्पलाई "Yes"मा सेट गर्नुहुन्छ भने, तपाईँंले बटन क्लिक गरेको बेलामा थिच्नुहोस बटनले फोकस प्राप्त गर्दछ।
एउटा छवि बटनमा ग्राफिक्स गुण छ। ग्राफिक्स ले तपाईँंले बटनमा प्रदर्शन गर्न चाहनुभएको ग्राफिकको बाटो र फाइलनाम निर्दिष्ट गर्दछ। यदि तपाईँंले बटनले ग्राफिक फाइल चयन गर्नुभएमा,बाटो र फाइलनाम स्वचालित तवरले पाठ बाकसमा समावेश हुन्छ।
सङ्ख्यासूचक फाँटहरू,मुद्रा फाँटहरू, मिति र समय फाँटहरू स्पिन बटनको रूपमा फारममा परिचय गराउन सकिन्छ।
स्तम्भ चौडाइलाई तालिका नियन्त्रण फाँटमा एकाइमा सेट गर्दछ जुन LibreOffice मोड्युल विकल्पमा निर्दिष्ट गरिएका छन। यदि तपाईँंले चाहनुहुन्छ भने,एउटा वैध मापन एकाइद्वारा पछ्याईएको एउटा मान प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि, २ से.मि.।
तपाईँंले एउटा कागजातको मुद्रण निकासमा या फाँटलाई देखिनका लागि नियन्त्रण गर्नुहुन्छ कि।
ट्याब क्रम गुणले क्रमलाई निर्धारण गर्दछ जसमा तपाईँंले ट्याब कुञ्जी थिच्दा फारममा नियन्त्रणहरू फोकस हुन्छन। एक भन्दा बढी नियन्त्रणहरू भएको एउटा फारममा तपाईँंले जब ट्याब कुञ्जी थिच्नुहुन्छ,फोकस अर्को नियन्त्रणमा सर्दछ। तपाईँंले क्रमलाई वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ जसमा फोकस ट्याब क्रम मुनि एउटा अनुक्रमणिका सँग परिवर्तन गर्दछ।
ट्याब क्रम गुण लुकेका नियन्त्रणहरू लाई उपलब्ध छैन यदि तपाईँंले चाहनुहुन्छ भने,तपाईँंले यो गुणलाई छवि बटनहरू र छवि नियन्त्रणहरूका लागि सेट गर्न सक्नुहुन्छ,ताकी तपाईँंले यि नियन्त्रणहरूलाई ट्याब कुञ्जी सँग चयन गर्न सक्नुहुन्छ.
फारम सिर्जना गर्दा, अनुक्रमणिका स्वचालित रूपमा नियन्त्रित फिल्डहरूमा यो फारममा थपिएको छ। प्रत्येक नियन्त्रण क्षेत्र थपिएको छ एक अनुक्रमणिकाले वृद्धि गरेको छ १. यदि तपाईं नियन्त्रणको सूचकांक परिवर्तन गर्नुहुन्छ भने अन्य नियन्त्रणहरूको सूचकांक स्वचालित रूपमा अपडेट हुन्छ। तत्वहरू ध्यान केन्द्रित गर्न सकिदैन (ट्याबस्टोप = होइन) लाई पनि मान निर्धारण गरिएको छ। यद्यपि, ट्याब कुञ्जी प्रयोग गर्दा यी नियन्त्रणहरू स्किप गरिएका छन्।
तपाईँंले फरक नियन्त्रणहरूको अनुक्रमणिका सजिलै सँग ट्याब क्रम संवादमा परिभाषित पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
ट्याबरोक गुणले यदि ट्याब कुञ्जी सँग नियन्त्रण फाँट चयन गर्न सकिन्छ भन्ने निर्धारण गर्दछ। निम्न विकल्प उपलब्ध छन:
ट्याब कुञ्जी प्रयोग गरेको बेलामा,फोकसले नियन्त्रण फड्किन्छ।
ट्याब कुञ्जी सँग नियन्त्रण चयन गर्न सकिन्छ।
प्रयोगकर्ताले स्क्रोलपट्टीमा स्लाईडरमा क्लिक गरेको बेलामा मान थप गर्न वा घटाउनका लागि मान वर्णन गर्नुहोस।
ड्रपडाउन गुणको साथ एक नियन्त्रण क्षेत्रमा अतिरिक्त तीर बटन छ जुन सूचीको खोलिएको छ। प्रति क्लिकमा अवस्थित फारम प्रविष्टहरू। रेखा गणना को अंतर्गत, तपाईं ड्रपडाउन अवस्थामा कति लाइनहरू (वा पङ्क्तिहरू) प्रदर्शन गरिनुपर्छ भनेर निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। संयोजन क्षेत्रहरूमा ड्रपडाउन गुण हुन सक्छ।
एउटा तालिका नियन्त्रणमा स्तम्भहरूको रूपमा घुसाईएका कम्बो बाकसहरू सधै पूर्वनिर्धारितको रूपमा ड्रपडाउन हुन्छन।
नियन्त्रणका लागि ढाँचा सङ्केत वर्णन गर्दछ। ढाँचा सङ्केत चयन गर्नका लागि... बटन चयन गर्नुहोस।
जाँच बाकसले लिङ्क गरिएको एउटा डाटाबेसको ZERO मानहरूलाई TRUE र FALSE मानहरू बाहेक प्रतिनीधित्व गर्न सक्छ कि भन्ने वर्णन गर्दछ। यदि डाटाबेसले तिन स्थितिहरू:TRUE, FALSE र ZERO स्विकार गरेमा मात्र यो कार्य उपलब्ध हुन्छ।
त्रिअवस्था गुण डाटाबेस फारमका लागि मात्र परिभाषित गरिएको हो, HTML फारमहरूका लागि होइन।
सङ्ख्यासूचक र मुद्रा फाँट सँग तपाईँंले दशमलव बिन्दुको दायाँ तिर प्रदर्शन भएका अंकहरूको सङ्ख्या निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ।
स्क्रोलपट्टी थम्बको साइज "value units" मा वर्णन गर्दछ। ("Scroll value max." minus "Scroll value min." ) / २ को एउटा मान थम्बमा परिणामित हुन्छ जसले पृष्ठभुमिको क्षेत्रको आधा भाग ओगट्दछ।
यदि ० मा सेट भए,त्यसपछि थम्बको चौडाइ यसको्को उचाइ सँग बराबर हुनेछ।
हरेक नियन्त्रण फाँट र हरेक फारममा एउटानामगुण छ जसबाट यो परिचित हुन सक्दछ। नाम Form Navigator मा देखिन्छ र,नामलाई प्रयोग गरेर,नियन्त्रण फाँट एउटा म्याक्रोबाट सन्दर्भित हुन सक्दछ। एउटा नाम पहिले नै पूर्वनिर्धारित सेटिङहरू प्रविष्ट गरिसक्यो। नियन्त्रण फाँट यसको नामद्वारा निर्दिष्ट भयो जुन फाँटको लेबुल र सङ्ख्या प्रयोग गरेर निर्माण गरियो।
यदि तपाईँं म्याक्रोहरू सँग काम गर्नुहुन्छ भने,निश्चित गर्नुहोस कि नियन्त्रणहरूका नामहरू अद्वितिय हुनु पर्दछ।
बिभिन्न फरक नियन्त्रणहरू जुन सगै कार्यगत तरीकाले सम्बन्धित हुन्छन, लाई समूह गर्न नाम प्रयोग हुन्छ,जस्तै रेडियो बटनहरू। त्यसो गर्नका लागि,समूहका सबै सदस्यहरूलाई उही नाम दिनुहोस:उदाहरणहरू उस्तै नामहरू सँग एउटा समूह निर्माण गर्दछ। सामूहिक नियन्त्रणहरू दृश्यात्मक तरीकाले एउटा समूह बाकस प्रयोग गरेर प्रतिनीधित्व गराउन सकिन्छ।
तालिका नियन्त्रणको तल्लो किनारामा नेभिगेसन पट्टी प्रर्दशन गर्ने कि निर्दिष्ट गर्दछ ।
तालिका नियन्त्रणमा, पङ्क्ति उचाइका लागि मान प्रविष्ट गर्नुहोस् । यदि तपाईँले चाहनुहुन्छ भने, तपाईँले वैध मापन एकाइ अनुसारको मान प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि, २ सेन्टि मिटर ।
पङ्क्तिबद्धता विकल्प बायाँ-पङ्क्तिबद्ध गरिएको,दायाँ-पङ्क्तिबद्ध गरिएको, र केन्द्रमा गरिएको छ । निम्न तत्वहरूका लागि ति विकल्प उपलब्ध छन्:
लेबुल फाँटहरूको शीर्षक
पाठ फाँटहरूको सामग्री
एउटा तालिका नियन्त्रणको स्तम्भहरूमा तालिका फाँटहरूको सामग्री
बटनहरूमा प्रयोग गरिएको ग्राफिक्स वा पाठ
बोलाईएका बटनहरू ग्राफिक्स पङ्क्तिबद्धताका लागि पङ्क्तिबद्धता विकल्प .
पढ्न-मात्रगुण प्रयोगकर्ताले पाठ प्रविष्टि गर्न सक्ने सबै ठाउँमा मानांकित गर्न सकिन्छ। यदि तपाईँंले पढ्न-मात्र गुणलाई ग्राफिक्स लाई एउटा डाटाबेसबाट ग्रहण एउटा छवि फाँटमा मानाङ्कन गर्नुहुन्छ भने ,प्रयोगकर्ताले नयाँ ग्राफिक्स डाटाबेस भित्र घुसाउन सक्ने छैन।
यदि तपाईँंले पाठ प्रकार"Multi-line with formatting" चयन गर्नुभयो भने,तपाईँंले एउटा डाटाबेस फाँटमा यो नियन्त्रणलाई बाध्न सक्नुहुन्न।
यो नियन्त्रण एउटा तालिका नियन्त्रण भित्रको पाठका लागि नामकरण"Multiline input" गरियो।
यदि प्रयोगकर्ताले एउटा पासवर्ड प्रविष्टि गर्दछ भने, तपाईँंले प्रयोगकर्ताद्वारा पासवर्डका लागि प्रविष्टि गरिएको क्यारेक्टरको सट्टामा प्रदर्शन हुने क्यारेक्टरहरू निर्धारण गर्नसक्नुहुन्छ। Password character मुनि, चाहेको क्यारेक्टरको ASCII सङ्केत प्रविष्टि गर्नुहोस।तपाईँंले मान ० देखी २५५ सम्म प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
ASCII सङ्केतहरू सँग अनुरूप क्यारेक्टरहरू विशेष क्यारेक्टर संवाद (टाँस्नुहोस - विशेष क्यारेक्टर) मा देख्न सकिन्छ।
सूची बाकस प्रविष्टिलाई पूर्वनिर्धारित प्रविष्टिको रूपमा चिन्हित गर्न वर्णन गर्दछ।
रिसेट प्रकार बटनको लागि, पूर्वनिर्धारित चयन प्रविष्टिले प्रयोगकर्ताद्वारा रिसेट बटन सक्रिय हुन्छ भने सूची बक्सको स्थिति परिभाषित गर्छ।
एउटा मान सूची समाविष्ट सूची बाकसका लागि,पूर्वनिर्धारित चयनसंवाद खोल्नका लागि तपाईँंले... बटन क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ।
Default selection संवादमा, तपाईँंले सूची बाकस समाविष्ट फारम खोलेको बेलामा,चयन गरिएको रूपमा चिन्हित गर्नका लागि तपाईँंले प्रविष्टिहरू चयन गर्नुहोस।
पूर्वनिर्धारित गुणले तपाईँंले फिर्ता हुनुहोस कुञ्जी थिच्दा,अनुरूप बटन सञ्चालन हुनेछ। यदि तपाईँंले संवाद वा फारम खोल्नुभयो भने र कुनै अगाडिको कृया बाहिर ल्याउनुभएन भने, यो गुण सँग भएको बटन पूर्वनिर्धारित बटन हो।
यो गुणलाई कागजातमा केबल एकल बटनमा मात्र मानाङ्कन गरिनुपर्दछ ।
वेब पृष्ठ फारमहरू प्रयोग गर्दा, तपाईं यस सम्पत्तिमा खोज मास्कहरूमा आउन सक्नुहुन्छ। यी मास्कहरू सम्पादन गर्दछ जुन पाठ फिल्ड समावेश गर्दछ र टाइप बटन पेश गर्दछ। खोजी शब्द पाठ फिल्डमा प्रविष्ट गरिएको छ र बटन सक्रिय गरेर खोज सुरु भयो। यदि बटन डिफल्ट बटनको रूपमा परिभाषित गरिएको छ भने, तथापि, खोज सुरु गर्न खोजी सर्भर प्रविष्ट गरेपछि मात्र दर्ता गर्नुहोस्।
नियन्त्रण फाँटका लागि पूर्वनिर्धारित मान सेट गर्दछ। उदाहरणका लागि, फारम खुलेपछि पूर्वनिर्धारित मान प्रविष्टि गरिनेछ।
रिसेट प्रकार बटनको लागि, पूर्वनिर्धारित मान प्रविष्टि यदि प्रयोगकर्ता रिसेट बटन सक्रिय हुन्छ भने नियन्त्रणको स्थिति परिभाषित गर्दछ।
पूर्वनिर्धारित मिति सेट गर्दछ ।
पूर्वनिर्धारित समय सेट गर्दछ ।
स्क्रोलपट्टीका लागि पूर्वनिर्धारित मान सेट गर्दछ।
पूर्वनिर्धारितबाट विकल्प वा जाँच वाकस चयन गरियो कि भन्ने वर्णन गर्दछ।
रिसेट प्रकार बटनको लागि, यदि प्रयोगकर्ताद्वारा रिसेट बटन सक्रिय हुन्छ भने तपाई नियन्त्रणको स्थिति परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ।
समूहबद्ध विकल्प क्षेत्रहरूको लागि, डिफल्ट सेटिङ्गसँग सम्बन्धित समूहको स्थिति पूर्वनिर्धारित स्थिति गुणद्वारा परिभाषित गरिएको छ।
धेरै जसो नियन्त्रण फाँटहरूका लागि पृष्ठभूमि रङ उपलब्ध हुन्छ । यदि तपाईँले पृष्ठभूमि रङ मा क्लिक गर्नुभएमा, सूचीले तपाईँलाई धेरै रङहरूमा रङ चयन गर्न सक्षम पार्ने खोल्दछ । "Standard" विकल्पले प्रणाली सेटिङ धारण गर्दछ । यदि चाहिएको रङ सूचीकृत छैन भने, ... बटनलाई रङ संवादमा रङ परिभाषित गर्न क्लिक गर्नुहोस् ।
नियन्त्रणहरूमा प्रतीकहरूका लागि रङ वर्णन गर्दछ,उदाहरणका लागि स्क्रोलपट्टीमा बाँणहरू।
प्रविष्टिहरू सूची गर्नुहोस
कृपया सुझावहरू कुञ्जीपाटी नियन्त्रणमा उल्लेख गर्दै।
पूर्वनिर्धारित सूची प्रविष्टि पूर्वनिर्धारित चयन कम्बो बाकस भित्र प्रविष्टि गरियो।
याद राख्नुहोस्, यदि on the Data tab under List Content Type, the option "Value List" चयन गरिएमा,यहाँ प्रविष्टि गरिएका सूची प्रविष्टिहरू मात्र फारममा मिलेका हुन्छन।
एचटीएमएल कागजातहरूको लागि, सामान्य ट्याबमा प्रविष्टि सूची प्रविष्टि HTML ट्याग <OPTION> सँग मेल खान्छ; सूची सामग्री अन्तर्गत डेटा ट्याबमा प्रविष्ट गरिएको मान सूचीको प्रविष्टि <OPTION VALUE=...> ट्यागसँग मिल्छ।
नियन्त्रण क्षेत्रहरूका लागि दृश्यात्मक पाठ वा शीर्षकहरू छन्, तपाइँ प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ प्रदर्शन फन्ट को चयन गर्नुहोस्। फन्ट संवाद खोल्नको लागि, ... क्लिक गर्नुहोस्। टांक। चयन गरिएको फन्टलाई नियन्त्रण क्षेत्र नामहरूमा प्रयोग गरिन्छ र तालिका नियन्त्रण फिल्डमा डेटा प्रदर्शन गर्न प्रयोग गरिन्छ।
फिल्टर गर्दा/क्रमबद्ध गर्दा
तपाईँले पनि प्रदर्शन गर्न लक्षित फ्रेम निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुन्छ URL जुन तपाइँले एक बटन क्लिक गर्नुहुँदा खुल्ला कागजात वा वेब पेज कार्य सङ्कलन गरेको छ)।
फ्रेम गुण HTML फारमहरूका लागि सम्बन्धित छ,तर डाटाबेस फारमहरूका लागि होइन।
स्पीन बाकस नियन्त्रणको हरेक सक्रियता सँग मध्यान्तरहरू थप गर्न वा घटाउन निर्धारण गर्दछ।
तपाईँंलाई एउटा सूची बाकसमा एउटा भन्दा बढी वस्तु चयन गर्न स्विकार गर्दछ।
ले URL हिज्जेमा समूह लेबुल वर्णन गर्दछ जसले एउटा मद्दत कागजात लाई सन्दर्भ गर्दछ र जुन नियन्त्रण फाँटको मद्दतद्वारा बोलाइन्छ। नियन्त्रण फाँट मद्दतका लागि मद्द,यदि फोकस नियन्त्रण फाँटमा अवस्थित गरेमा प्रयोगकर्ताले F1 थिचेमा खोल्न सकिन्छ।त
नियन्त्रणमा टिपको रूपमा प्रदर्शन हुने मद्दत पाठ प्रविष्ट गर्न विकल्प प्रदान गर्दछ। टिपले प्रयोगकर्ता मोडमा जब माउसलाई नियन्त्रणको माथि सार्दा पाठ देखाउँदछ।
यूआरएल टाइप बटनहरूको लागि, मद्दत पाठ यूआरएल अन्तर्गत URL ठेगानाको सट्टा विस्तारित टिपको रूपमा देखिन्छ।
हरेक नियन्त्रण फाँटमा तपाईँंले थप सूचना वर्णन गर्न वा नियन्त्रण फाँटको लागि वर्णनात्मक पाठ वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोग्राम सङ्केतमा प्रयोग गर्न सकिने थप सूचना बचत गर्नका लागि यो गुणले मद्दत गर्दछ। यो फाँट प्रयोग हुन सक्दछ,उदाहरणका लागि,चलहरूका लागि वा अरू मूल्याङ्कन परामितिहरूका लागि।
लुकाइएको नियन्त्रण मा, मान अन्तर्गत, तपाईँले लुकाइएको नियन्त्रणद्वारा बपौति गरिएको डेटा प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ ।
सङ्ख्यासूचक र मुद्रा फाँटहरूका लागि,तपाईँंले अधिकतम मान निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ जुन प्रयोगकर्ताले प्रविष्टि गर्न सक्दछन।
तपाईँंले मान अन्तरालहरूलाई सङ्ख्यासूचक र मुद्रा स्पिन बाकसहरूमा प्रिसेट गर्दछ। मानहरूलाई बढाउन वा घटाउनका लागि स्पिन बाकसका बाँण बटनहरू प्रयोग गर्नुहोस।
सङ्ख्यासूचक र मुद्रा फाँटहरूका लागि प्रयोगकर्तालाई सानो मान राख्न रोक्नका लागि तपाईँंले न्यूनतम मान निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ।
एउटा मिति निर्धारण गर्दछ जसले प्रयोगकर्ताद्वारा परिचय गराईको मिति जुन अर्को मानद्वारा अधिक हुँदैन।
मिति फाँटहरू सँग तपाईँंले मिति पढ्नका लागि तपाईँंले ढाँचा निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ।
सबै ढाँचा फाँटहरू(मिति,समय,मुद्रा,सङ्ख्यासूचक)हरू स्वचालित तवरले चयन गरिएको ढाँचामा ढाँचाबद्ध हुन्छन तत्कालै तपाईँंले तिनीहरूलाई कसरी आगत प्रविष्टि गर्नुभयो भन्ने छोडेर छोड्नुहोस।
प्रयोगकर्ताले प्रविष्टि गर्न सक्ने सबै भन्दा पहिलेको मिति निर्धारण गर्दछ।
मुकुण्डो सम्पादन गर्नुहोस
बान्की फाँटहरूमा क्यारेक्टर सङ्केत निर्दिष्ट गरेर ,तपाईँंले प्रयोगकर्ताले बान्की फाँटमा के प्रविष्ट गर्न सक्छन भन्ने कुरा निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ।
सम्पादन मुकुण्डोको लम्बाइले संभाव्य आगत अवस्थाहरूको सङ्ख्या निर्धारण गर्दछ। यदि प्रयोगकर्ताले सम्पादन मुकुण्डो सँग अनुरूप नभएका क्यारेक्टरहरू प्रविष्टि गरेमा,प्रयोगकर्ताले फाँट छोड्ने बेलामा आगत अस्विकार हुन्छ। सम्पादन मुकुण्डो परिभाषित गर्नको लागि तपाईँंले निम्न क्यारेक्टरहरू प्रविष्टि गर्न सक्नुहुन्छ:
पाठ निरन्तर। यो स्थिति सम्पादन गर्न सकिँदैन। क्यारेक्टर लिखित मास्कको सम्बन्धित पदमा प्रदर्शित गरिएको छ।
क्यारेक्टरहरू a-z र A-Z प्रविष्टि गर्न सकिन्छ। ठुला क्यारेक्टरहरू साना क्यारेक्टरहरूमा बदलिदैनन।
क्यारेक्टरहरू A-Z प्रविष्टि गर्न सकिन्छ। यदि सानो अवस्थाका अक्षरहरू प्रविष्टि गरिएमा,यो स्वचालित तवरले ठुला अक्षरमा परिवर्तन हुन्छ।
क्यारेक्टरहरू a-z र A-Z र ०-९ प्रविष्टि गर्न सकिन्छ। ठुला क्यारेक्टरहरू साना क्यारेक्टरहरूमा परिवर्तन भएनन।
क्यारेक्टरहरू A-Z र ०-९ प्रविष्टि गर्न सकिन्छ।यदि साना किसिमका अक्षरहरू प्रविष्टि गरिएमा,यो स्वचालित तवरले ठुला अक्षरमा बदलिन्छ।
क्यारेक्टरहरू ०-९ मात्र प्रविष्टि गर्न सकिन्छ।
सबै मुद्रणयोग्य क्यारेक्टरहरू प्रविष्टि गर्न सकिन्छ।
सबै मुद्रणयोग्य क्यारेक्टरहरू प्रविष्टि गर्न सकिन्छ। यदि साना किसिमका अक्षरहरू प्रविष्टि गरिएमा,यो स्वचालित तवरले ठुला अक्षरमा बदलिन्छ।
क्यारेक्टर मुकुण्डो "__.__.2000" का लागि,उदाहरणका लागि,"NNLNNLLLLL" सम्पादन मुकुण्डो परिभाषित गर्नुहोस ताकी प्रयोगकर्ताले मिति प्रविष्टि गरिरहेको बेलामा मात्र चार अंकहरू प्रविष्टि गर्न सक्दछ।
एउटा मुद्रा फाँटमा, मुद्रा प्रतीक गुणमा क्यारेक्टर वा स्ट्रिङलाई प्रविष्टि गरेर तपाईँले मुद्रा प्रतीकलाई पूर्व-परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ।
ले पहिलो स्तम्भ पङ्क्ति लेबुलहरू सँग प्रदर्शित छ की,जसमा हालको रेकर्ड एउटा बाँणद्वारा चिन्हित हुन्छ कि भन्ने वर्णन गर्दछ।
रेकर्डमा क्रिया गर्दा
कम्बो बाकसका लागि गुण सँगै,तपाईँंले ड्रपडाउन सूचीमा कति रेखाहरू प्रदर्शन गर्ने भन्ने कुरा निर्दिष्ट गर्न ॐसक्नुहुन्छ।ड्रपडाउन विकल्प नभएका नियन्त्रण फाँटहरू सँगै, रेखा प्रदर्शन नियन्त्रण फाँट र फन्ट साइजद्वारा रेखाको प्रदर्शन निर्दिष्ट गरिनेछ।
लेबुल गुणले फारममा प्रदर्शन भएको नियन्त्रण फाँटको लेबुल सेट गर्दछ। यो गुणले तालिका नियन्त्रण फारमहरूमा डेटा फाँटको दृश्यात्मक लेबुल बा स्तम्भ हेडर निर्धारण गर्दछ।
जब तपाइँ नयाँ नियन्त्रण सिर्जना गर्नुहुन्छ, वर्णन पूर्वनिर्धारित रूपमा नाम गुणमा प्रयोग गरिन्छ नियन्त्रण लेबलिंगको लागि डिफल्टको रूपमा। लेबलमा नियन्त्रण फिल्ड नाम र एक पूर्णांक नियन्त्रणमा समावेश हुन्छन् (उदाहरणका लागि, कमांडबटन 1)। शीर्षक गुणको साथ, तपाइँले अर्को विवरण नियन्त्रणमा राख्न सक्नुहुन्छ ताकि लेबलले नियन्त्रणको प्रकार्यलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। यस प्रविष्टिलाई प्रयोगकर्तालाई दृश्यात्मक नियन्त्रणमा अभिव्यक्तित्मक लेबल असाइन गर्न क्रमबद्ध गर्नुहोस्।
Titleगुण प्रयोगकर्तालाई दृश्यात्मक ईन्टरफेसमा फारम तत्व लेबल मिलाउन प्रयोग हुन्छ। यदि तपाईँं म्याक्रोहरू सँग कार्य गर्नुहुन्छ भने,रनटाईम मा याद गर्नुहोस् , एउटा नियन्त्रण जहिले पनि Name गुणबाट परिचित हुन्छ।
नियन्त्रणको लेबुलका लागि स्रोत वर्णन गर्दछ। लेबुलको पाठ एउटा डाटाबेसको फाँटको सट्टामा प्रयोग हुन्छ। उदाहरणका लागि,फिल्टर नेभिगेटर , खोज संवादमा,र एउटा स्तम्भ नामको रूपमा तालिका दृश्यमा प्रयोग हुन्छ।
लेबुलको एउटा क्यारेक्टर एउटा mnemonic को रूपमा परिभाषित गर्नका लागि,ताकी प्रयोगकर्ताले कुञ्जीपाटीमा क्यारेक्टर थिचेर यो नियन्त्रणलाई पहुँच गर्न सकुन,लेबुलमा क्यारेक्टरको अगाडि एउटा टिल्ड (~) क्यारेक्टर घुसाउनुहोस।
रेडियो बटनहरू प्रयोग गरेको बेलामा एउटा समूह फ्रेमको पाठ मात्र लेबुल फाँटको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो पाठ उही समूहको सबै रेडियो बटनहरूमा लागू हुन्छ।
यदि तपाईँंले पाठ फाँटको भन्दा अर्को ... बटनमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने,तपाईँंले लेबुल फाँट चयन संवाद देख्नुहुन्छ। सूचीबाट एउटा लेबुल चयन गर्नुहोस।
एउटा मानांकित लेबुल फाँट र नियन्त्रण विचमा लिङ्क हटाउनका लागि कार्य नहुने बाकस जाँच गर्नुहोस।
दोहोरिई रहेका मिलिसेकेण्डहरू विचको ढिलो वर्णन गर्दछ। जब तपाईँंले बाँण बटन क्लिक गर्नुभयो भने वा स्क्रोलपट्टीको पृष्ठभूमि क्लिक गर्नुभयो भने,एउटा दोहोरिई रहेन घटना रहन्छ ,वा एउटा नेभिगेसन पट्टीको रेकर्ड नेभिगेसन बटनहरू क्लिक गरेर, र तपाईँंले माउस बटन केही समयका लागि थिचेर राखेमा दोहोरिने घटना रहन्छ। तपाईँंले एउटा वैध समय एकाइद्वारा पछ्याईएको मान प्रविष्टि गर्न सक्नुहुन्छ,उदाहरणका लागि, २ सेकेण्ड वा ५०० मिलि सेकेण्ड।
एक भन्दा बढी रेखामा पाठ प्रदर्शन गर्दछ। तपाइँलाई पाठ बक्समा रेखा ब्रेक प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ, ताकि तपाईं एक भन्दा बढी पाठ पाठ प्रविष्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मैन्युअल रूपले रेखा ब्रेकमा प्रविष्ट गर्न, कुञ्जी कुञ्जी थिच्नुहोस्।
सँग पाठ पङ्क्तिहरू समाप्त हुन्छ
पाठ फाँटहरूका लागि,डाटाबेस स्तम्भ भित्र पाठ लेखिरहेको बेलामा प्रयोग गर्नका लागि रेखा अन्त्य सङ्केत चयन गर्नुहोस।
यदि नियन्त्रण फाँटमा गुण"Enabled" (हो)छ भने, फारम प्रयोगकर्ताले नियन्त्रण फाँटलाई प्रयोग गर्न सक्दछ। यदि गुण अक्षम पारिएमा,यो सक्षम पारिने छैन (हैन) र खरानी रङमा प्रर्दशन हुनेछ।
एउटा समय निर्धारण गर्दछ जुन प्रयोगकर्ताले परिचय गराएको अर्को मानद्वारा बढी हुन सक्दैन।
समय प्रदर्शनका लागि तपाईँंले आवश्यक ढाँचा परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रयोगकर्ताले प्रविष्टि गर्न सक्ने न्यूनतम समय निर्धारण गर्दछ।
प्रयोगकर्ताले स्क्रोलपट्टीमा क्लिक गरेको बेलामा मान थप गर्न वा घटाउनका लागि मान वर्णन गर्नुहोस।
नियन्त्रणको साइज फिट गर्नका लागि छवि लाई रिसाइज गर्दछ।
स्क्रोल मान अधिक.
एउटा स्क्रोलपट्टी नियन्त्रणको अधिकतम मान वर्णन गर्नुहोस।
स्क्रोल मान न्यून.
एउटा स्क्रोलपट्टी नियन्त्रणको न्यूनतम मान वर्णन गर्नुहोस।
तपाईँंले एउटा पाठ बाकसका लागि निर्दिष्ट गरेको स्क्रोलपट्टी प्रकार थप गर्दछ।
स्वत: भर्ने विकल्पले तपाईँले एउटा प्रविष्टि टाइप सुरु गर्नुभए पछि अघिल्लो प्रविष्टिहरूको सूची प्रर्दशन गर्दछ ।
अकिय र मुद्रा फाँट सँग तपाईँंले यात हजारौ विभाजक प्रयोग भएका छन कि भन्ने निर्धारण गर्दछ।